Sinoa mafana tsindry kofehy tenona volavolan-tsambo vita amin'ny volon'ondry fanamboarana sy orinasa | Volotsangana Volamena
Ny tampon-kazo laminated volotsangana dia manana endrika voajanahary sy mahitsy. Ny tabilao dia manana endrika volotsangana voajanahary. Ankoatr'izay, ny firafiny dia tsy mitovy, ary ny vokany haingo dia hafa ihany koa. Raha ampitahaina amin'ny hazo matevina amin'ny ankapobeny, ny tanjaky ny mekanika an'ny volotsangana misy laminated dia avo kokoa, ary ny coefficient an'ny shrinkage dia kely kokoa. REBO decking ivelan'ny trano dia misy volotsangana karbaona 18mm matevina, efa misy menaka ary misy fantsom-pitaovana.
Ny volotsangana vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy dia amboarina amin'ny alàlan'ny fizotrany manokana izay mampiasa 100% ny volotsangana Moso, ka mahatonga azy io ho mafy kokoa sy mateza kokoa noho ny volotsangana mahazatra. it mahery kokoa sy mafy noho ny ala. Ny volotsangana vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy dia iray amin'ireo safidy faran'izay sarotra indrindra misy, sarotra noho ny hazo mafy nentim-paharazana. Ny fanenomana volotsangana vita amin'ny srand sy ny gorodona dia mahatohitra ny hamandoana kokoa noho ny gorodona volotsangana hafa sy ireo fitaovana hafa. REBO decking volotsangana dia safidy tsara ho anao.
Ny tabilao vita amin'ny volotsangana dia manana savaivony kely, rindrina lavaka ary maranitra lehibe, ary ny firafitry ny firafiny dia samy hafa be amin'ny an'ny hazo. Ny tanjaka sy ny hakitroky ny volotsangana dia ambony noho ny an'ny hazo tsotra, noho izany, ny tanjaky ny vokatra vita amin'ny volotsangana dia lehibe kokoa noho ny an'ny vokatra hazo mahazatra. Ny tabilao vita amin'ny volotsangana dia manana endrika mahitsy sy malama, loko tsotra, mora paoka, mandoko ary karbonika. Ny volotsangana dia azo alamina mba ho vahaolana tena tsara amin'ny fananganana faritra ivelany toy ny dobo filomanosana, patio ary ny sisin-dalana.
Ny tampon-kazo laminated volotsangana dia manana endrika voajanahary sy mahitsy. Ny tabilao dia manana endrika volotsangana voajanahary. Ankoatr'izay, ny firafiny dia tsy mitovy, ary ny vokany haingo dia hafa ihany koa. Raha ampitahaina amin'ny hazo matevina amin'ny ankapobeny, ny tanjaky ny mekanika an'ny volotsangana misy laminated dia avo kokoa, ary ny coefficient an'ny shrinkage dia kely kokoa. REBO decking ivelan'ny trano dia misy volotsangana karbaona 18mm matevina, efa misy menaka ary misy fantsom-pitaovana. Ny zorony efatra dia voatavo avokoa, ka mora sy ahazoana aina ny mandeha amin'ny gorodona volotsangana. Raha vantany vao tafapetraka ny tokotanin'ny volotsangana, dia mijanona kely ny fisarahana ka tsy mijanona ny rano ary afaka mivezivezy ny rivotra. Ny tontonana ivelany amin'ny volotsangana dia misy sisiny milamina sy voasokitra miaraka amin'ny sarona tsy misosona. Azo apetraka misaraka amin'ny lafiny roa koa izy io.
Manaraka: Loko mainty tsy misy volavolan-drakotra vita amin'ny volotsangana
Birao fametahana volotsangana
Sora-baventy vita amin'ny volon'ondry vita amin'ny kofehy vita amin'ny karbaona